I-Boron Nitride Nanotubes - Ichithwe futhi ihlakazekile kusetshenziswa i-Sonication
I-Ultrasonication isetshenziswa ngempumelelo ekucutshungulweni nasekuhlakazekeni kwe-boron nitride nanotubes (BNNTs). I-high-intact sonication ihlinzeka ngokufana okufanayo nokusatshalaliswa kuzisombululo ezahlukahlukene futhi ngaleyo ndlela kuyindlela ebalulekile yokucubungula ukufaka ama-BNNTs kuzixazululo nakumatriki.
Ukucubungula kwe-Ultrasonic kweBoron Nitride Nanotubes
Ukuze ufake i-boron nitride nanotubes (BNNTs) noma i-boron nitride nanostructures (ama-BNN) njengama-nanosheets nama-nanoriboni ezixazululweni zamanzi noma ama-matrices e-polymeric, kudingeka inqubo yokuhlakazeka esebenza kahle nethembekile. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kunikeza amandla adingekayo wokuqothula, ukunqanda, ukusabalalisa, nokusebenzisa i-boron nitride nanotubes kanye ne-boron nitride nanostructures ngokusebenza kahle okukhulu. Amapharamitha wokucubungula alawulwa kahle we-high-intensity ultrasound (okungukuthi amandla, ubukhulu, isikhathi, izinga lokushisa, nengcindezi) avumela ukulungisa ngamunye izimo zokucubungula kumgomo wenqubo oqondisiwe. Lokhu kusho ukuthi ukuqina kwe-ultrasonic kungashintshwa maqondana nokwakheka okuthile (ikhwalithi ye-BNNTs, i-solvent, i-solid-liquid concentration njll), ngaleyo ndlela ithole imiphumela emihle.
Indlela ye-Ultrasonic yokuhlanganisa ama-boron nitride nanocups
(isifundo nesithombe: Yu et al. 2012)
Ukusetshenziswa kokucubungula kwe-BNNT ne-BNN kwe-ultrasonic kumboza uhla oluphelele kusuka ekusakazekeni okufana nhlangothi zombili kwe-boron nitride nanostructures (2D-BNNs), ekusebenzeni kwabo nasekuqedweni kwamakhemikhali kwe-mono-layer hexagonal boron nitride. Ngezansi, sethula imininingwane ekusakazekeni kwe-ultrasonic, ukukhishwa, nokusebenza kwama-BNNTs nama-BNN.
Ukufakwa kwama-ultrasonic dispersers (2x I-UIP1000hdT) wokucubungula ama-nanonubes ama-boron nitride esikalini sezimboni
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kweBoron Nitride Nanotubes
Lapho ama-boron nitride nanotubes (ama-BNNTs) asetshenziselwa ukuqinisa ama-polymers noma ukuhlanganisa izinto ezintsha, kudingeka ukuhlakazwa okufanayo nokuthembekile ku-matrix. Ama-ultrasonic dispersers asetshenziswa kabanzi ukusabalalisa izinto ze-nano ezinjenge-CNTs, i-metallic nanoparticles, izinhlayiya ze-core-shell nezinye izinhlobo zezinhlayiya ze-nano esigabeni sesibili.
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kusetshenziswe ngempumelelo ukunqanda nokusabalalisa ama-BNNTs ngokufanayo kwizixazululo ezinamandla nezingezona ezinamanzi kufaka phakathi i-ethanol, i-PVP ethanol, i-TX100 ethanol kanye nama-polymers ahlukahlukene (isb. Polyurethane).
I-surfactant evamile esetshenzisiwe ukuzinzisa ukusabalalisa kwe-BNNT okulungiselelwe nge-ultrasonically yisisombululo se-1% wt sodium dodecyl sulfate (SDS). Isibonelo, ama-5 mg BNNTs ahlakazeke nge-ultrasonically esitsheni nge-5 mL ye-1% wt. Isixazululo se-SDS sisebenzisa i-ultrasonic probe-type disperser efana ne- I-UP200St (26kHz, 200W).
Ukuhlakazeka okunamanzi kwama-BNNTs kusetshenziswa i-Ultrasound
Ngenxa yokuxhumana kwabo okuqinile kwe-van der Waals kanye ne-hydrophobic surface, i-boron nitride nanotubes ayisabalali kahle kwizisombululo ezenziwa ngamanzi. Ukuxazulula lezi zinkinga, uJeon et al. (2019) kusetshenziswe i-Pluronic P85 ne-F127, enamaqembu we-hydrophilic namaqembu e-hydrophobic ukwenza i-BNNT isebenze ngaphansi kwe-sonication.
Izithombe ze-SEM zama-BNNTs ashoshiwe ngemuva kwezikhathi ezahlukahlukene ze-sonication. Njengoba kukhonjisiwe, ubude balawa ma-BNNT ancipha ngokwanda kwesikhathi sokuqoqwa sonication.
(isifundo nesithombe: Lee et al. 2012)
Ukukhishwa kwamahhala kwe-Boron Nitride Nanosheets kusetshenziswa i-Sonication
U-Lin et al. (2011) wethula indlela ehlanzekile yokukhipha nokusabalalisa i-hexagonal boron nitride (h-BN). I-hexagonal boron nitride ngokwesiko ibhekwa njengengancibiliki emanzini. Kodwa-ke, bakwazile ukukhombisa ukuthi amanzi ayasebenza ukukhipha izingcezu ze-h-BN ezigqinsiwe kusetshenziswa i-ultrasonication, kwakheka ukusabalalisa okunamanzi "okuhlanzekile" kwama-nanosheets e-h-BN ngaphandle kokusebenzisa ama-surfactants noma i-organic functionalization. Le nqubo yokukhishwa kwe-ultrasonic ikhiqize ama-nanosheets ama-h-BN ambalwa-layered kanye nezinhlobo ze-monolayered nanosheet nezinhlobo ze-nanoribbon. Ama-nanosheets amaningi ayengamasayizi we-lateral ancishisiwe, okwabangelwa ukusikwa kwamashidi omzali h-BN abangelwa i-sonication-assisted hydrolysis (eqinisekiswe ukuhlolwa kwe-ammonia nemiphumela ye-spectroscopy). I-hydrolysis eyenziwe nge-ultrasonically iphinde ikhuthaze ukukhishwa kwama-nanosheets e-h-BN ekusizeni umphumela we-polarity we-solvent. Ama-nanosheets ama-h-BN kulezi zihlakala ezinamanzi "ahlanzekile" akhombise ukucubungula okuhle ngezindlela zezixazululo ezigcina izici zomzimba. Ama-nanosheets ama-h-BN ahlakazekile emanzini abuye akhombise ukusondelana okuqinile namaprotheni afana ne-ferritin, okuphakamisa ukuthi izindawo ze-nanosheet zazitholakala ukuze kuqhutshekwe nokuhlanganiswa kwe-bio.
I-Ultrasonic nano-dispersion ne-ultrasonicator UP400St
Indlela yokuhlakazeka kwe-sono-mechanical esebenzisa i-ultrasonic cavitation kanye ne-shear forces yindlela ehlangene yomzimba, efakazelwe ukuthi iyakwazi ukulungisa amaphutha we-BNNTs nokuqinisa ama-BNNTs ngamanye ngenkathi igcina ubuqotho bayo nezakhiwo zangaphakathi. Ukufaka amandla we-ultrasonic afanelekile (i-Ws / mL), i-amplitude eguquliwe nobude be-sonication, ukusabalalisa kwe-ultrasonic kungaphazamisa futhi kusabalalise i-BNNTS ngokufanayo. Ama-amplitudes aphezulu kanye ne-sonication ende kungasetshenziswa uma ubude be-boron nitride nanotubes bungancishiswa. Funda kabanzi ngokuncishiswa kosayizi we-ultrasonic nokusika ubude kwama-BNNTs esigabeni esilandelayo.
Ukuncishiswa Kosayizi We-Ultrasonic Nokusikwa KweBoron Nitride Nanotubes
Ubude be-boron nitride nanotubes budlala indima ebalulekile uma kukhulunywa ngokucubungula okwalandela kwama-BNNTs kuma-polymers nezinye izinto ezisetshenziswayo. Ngakho-ke kuliqiniso elibalulekile ukuthi ukwenziwa kwe-BNNTs ku-solvent kungagcini ngokuhlukanisa ama-BNNTs ngawodwana, kepha futhi kunciphise ama-BNNTs ahleliwe ngaphansi kwezimo ezilawulwayo. Ama-BNNTs afinyeziwe anethuba eliphansi kakhulu lokugoqa ngesikhathi sokulungiselela okuyinhlanganisela. Bona ku-al. (2012) kukhombisile ukuthi ubude be-BNNTs obusebenzayo bungancishiswa kahle kusuka ku-> 10µm kuye ku- ∼500nm nge-ultrasonication. Ukuhlolwa kwabo kusikisela ukuthi ukuhlakazwa okusebenzayo kwe-ultrasonic kwe-BNNT kusixazululo kuyadingeka ekusikeni okunjalo kokwehlisa usayizi we-BNNT nokusika.
(c) I-mPEG- DSPE / BNNTs esakazeke kahle emanzini (ngemuva kwe-2 h ye-sonication). (d) Omele uhlelo lwe-BNNT olusebenza ngemolekyuli ye-mPEG-DSPE
I-homogenizer ye-ultrasonic UP400St ekusakazekeni kwe-boron nitride nanotubes (BNNTs)
Ama-Ultrasonicators Wokusebenza Okuphezulu we-BNNT Icubungula
Izici ezihlakaniphile ze-Hielscher ultrasonicators zenzelwe ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile, imiphumela yokuzala kanye nobungani bomsebenzisi. Amasethingi wokusebenza angafinyeleleka kalula futhi ashayelwe ngemenyu enembile, engatholakala nge-digital color touch-display nange-remote control yesiphequluli. Ngakho-ke, zonke izimo zokucubungula ezinjenge-net energy, amandla aphelele, i-amplitude, isikhathi, ingcindezi kanye nezinga lokushisa zirekhodwa ngokuzenzekelayo ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze futhi uqhathanise ukuqhutshwa kwangaphambilini kwe-sonication futhi ukwandise inqubo yokukhipha nokusabalalisa ye-boron nitride nanotubes nama-nanomaterials ekusebenzeni kahle kakhulu.
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics zisetshenziswa emhlabeni wonke ekwenzeni ama-BNNTs aphezulu. Ama-ultrasonicators ezimboni zeHielscher angasebenza kalula ama-amplitudes aphezulu ekusebenzeni okuqhubekayo (24/7/365). Amplitudes afika ku-200µm angenziwa kalula ngokuqhubekayo ngama-sonotrode ajwayelekile (ama-ultrasonic probes / izimpondo). Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ngenxa yokuqina kwabo nokunakekelwa okuphansi, izinhlelo zethu zokukhishwa kwe-ultrasonic nokusabalalisa zivame ukufakelwa izinhlelo zokusebenza ezisindayo nezindawo ezifuna kakhulu.
Amaprosesa we-Hielscher ultrasonic wokusabalalisa nokuqothula ama-boron nitride nanotubes kanye nama-CNTs kanye ne-graphene sekuvele kufakwe emhlabeni wonke ngezinga lokuhweba. Xhumana nathi manje ukuxoxa ngenqubo yakho yokukhiqiza ye-BNNT! Abasebenzi bethu abanolwazi oluningi bazokujabulela ukwabelana ngolwazi oluthe xaxa ngenqubo yokukhishwa kwamafutha, izinhlelo ze-ultrasonic kanye namanani entengo!
I-Boron Nitride Nanotubes namaNanomaterials
Ama-nanotubes e-Boron nitride anikela ngesakhiwo esiyingqayizivele se-athomu esihlanganiswe ngama-athomu we-boron ne-nitrogen ahlelwe kunethiwekhi enezinhlangothi eziyisithupha. Lesi sakhiwo sinikeza i-BNNT izakhiwo eziningi ezinhle kakhulu zangaphakathi njengamandla amakhulu opharetha, ukuqhutshwa okuphezulu kokushisa, ukusebenza okuvikela ugesi, impahla ye-piezoelectric, amandla wokuvikela i-neutron, nokumelana ne-oxidation. Igebe le-5 eV band lingasetshenziswa futhi kusetshenziswe izinkambu zikagesi eziguqukayo, ezenza ama-BNNTs athakazelise amadivayisi kagesi. Ngokwengeziwe, ama-BNNTs anokumelana okuphezulu kwe-oxidation aze afike ku-800 ° C, akhombisa u-piezoelectricity omuhle kakhulu, futhi angaba yinto enhle yokugcina igumbi lokushisa i-hydrogen.
Ama-BNNTs vs Graphene: Ama-BNNTs angama-analogs wesakhiwo se-graphene. Umehluko omkhulu phakathi kwe-boron nitride-based nanomaterials nozakwabo abasebenza ngekhabhoni imvelo yezibopho eziphakathi kwama-athomu. I-bond CC kuma-carbon nanomaterials inomlingiswa omsulwa we-covalent, kuyilapho ama-BN bond ethula uhlamvu lwe-ionic ngokwengxenye ngenxa yama-e − pair ku-sp2 hybridized BN. (bheka u-Emanet et al. 2019)
Ama-BNNTs vs. Carbon Nanotubes: I-Boron nitride nanotubes (BNNTs) ibonisa i-nanostructure efanayo ye-tubular kuma-carbon nanotubes (i-CNTs) lapho ama-athomu e-boron ne-nitrogen ahlelwe khona kunethiwekhi enezinhlangothi eziyisithupha.